बिस २०८५ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा रहेका न्यायाधीशहरुको नाम यस प्रकार छ ! « Pana Khabar
बिस २०८५ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा रहेका न्यायाधीशहरुको नाम यस प्रकार छ !
लगभग दुई बर्ष अघि सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरुको न्युक्ति हुदा संसदीय सुनवाईमा सांसदहरुले सपना प्रधान र हरिकृष्ण कार्कीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए पनि सुनुवाइ सहजरुपमा टुंगिएको थियो । कांग्रेसले यी दुई नाममा आपत्ति जनाउनुको अर्थ सर्बोच्चको न्यायाधीश हुन लागेको मात्र होइन, भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा राखिएका कारणले पनि थियो । एमालेले योजनावद्ध रुपमा यसरी नाम सिफारिस गराएको आरोप समेत लाग्यो ।
यसपटक सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका ११ मध्ये चार जना भावी प्रधानन्यायाधीश पनि हुन् । रोलक्रममा कुनै विघ्नवाधा नआएमा हरिकृष्ण कार्की २०७९ सालमा प्रधान न्यायाधीश हुनेछन् ।
कार्कीले एक वर्ष प्रधानन्यायाधीश नहुँदै उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि अहिले पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीशबाट सिफारिस भएका विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुनेछन । उनले पनि ९ महिनापछि अवकाश पाउनेछन् र कानुन व्यवसायीमध्येबाटै सिफारिस भएका प्रकाश राउत एक वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
त्यसपछि सपना प्रधान मल्ल ०८२ देखि ०८५ सालसम्म तीन वर्ष सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुनेछिन् । सपना सुशीला कार्कीपछि दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन् एक दशकको बीचमा ।
को-को छन् लाइनमा ?
सुशीला कार्कीले आफ्नो सुनुवाइका क्रममा पनि सपनाको खुलेर प्रतिरक्षा गर्दै उनीजस्तो सक्षम महिला सर्वोच्चमा आउनुपर्ने बताएकी थिइन् । हालकी प्रधानन्यायाधीश कार्की यसै वर्षको अन्तमा अवकाश हुनेछिन् ।
उनीपछि गोपालप्रसाद पराजुली करीव एक वर्ष प्रधान न्यायाधीश हुनेछन् । पराजुलीपछि दीपकराज जोशी करीव साढे दुई वर्ष प्रधान न्यायाधीश हुनेछन् भने त्यसपछि आउने चोलेन्द्र शमसेर जबरा लगभग पूरा कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । चोलेन्द्रको अवकाशपछि हरिकृष्णको पालो आउनेछ ।
न्यायपरिषदले गत फागुनमा पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशमध्येबाट दीपककुमार कार्की, केदार चालिसे, मीरा खड्का, शारदाप्रसाद घिमिरे, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै कानुन व्यवसायीबाट हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाश राउत र सपना प्रधान मल्लको नाम सिफारिस गरेको थियो । यीमध्ये सिन्हा र राउत कांग्रेसनिकट मान्छिन् भने कार्की र प्रधान एमाले निकट ।
अनलाइनखबरमा २०७३ साउन १६मा प्रकाशित समचार
प्रकाशित मिति २०७४ पुष २८ , शुक्रवार